टाइमटेक अपटाइमको कुरा कसरी हुन्छ?
टाइमटेक अमेजन ई.ए.2मा चल्छ जुन एक अत्यन्त विश्वसनीय विश्वसनीय वातावरण प्रदान गर्दछ जहाँ प्रतिस्थापन उदाहरणहरू तीव्र गतिमा हुन सक्छ र अनुमान लगाउन सकिन्छ। अमेजन ईसी2सेवा स्तर सम्झौता प्रतिबद्धता प्रत्येक Amazon EC2 क्षेत्र को लागि 9999% उपलब्धता हो। डेटा नियमित रूपमा ब्याक अप गरिएको छ र बहु-AZ डिप्लोमेन्टहरू छन् जुन अनप्लेड गरिएका आउटजहरू विरुद्ध तपाईंको हालको डाटाबेस अद्यावधिकहरू सुरक्षित गर्दछ। हाम्रो सबै आधारभूत संरचनाले अमेजन क्लाउडविचद्वारा प्रत्यक्ष, लगातार (24/7/365) को अनुगमन गरेको छ जुन सम्भावित समस्याहरू पहिचान गर्न र रोक्नको लागि।
टाइमटेकले मेरो डेटा कसरी सुरक्षित राख्नेछ?
टाइमटेक अमेज़न ल्चस्टिक ब्लक स्टोर (अमेजन ईबीएस) द्वारा ब्लक स्तर स्टोरेज संस्करणहरु को प्रयोग गर्दछ। अमेजन ईबीएस संस्करणहरू अनिवार्य रूपले हार्ड डिस्कहरू छन् जुन एक चलिरहेको अमेजन ईसी2उदाहरणमा संलग्न हुन सक्छ र विशेष रूपमा एप्लिकेसनहरूका लागि उपयुक्त छ जुन डेटाबेस, फाईल प्रणाली वा कच्ची ब्लक तह भण्डारणमा पहुँच आवश्यक छ। ईबीएस संस्करणहरूले अनावश्यक डेटा भण्डारण गर्दछ, तिनीहरूलाई सामान्य हार्ड ड्राइभ भन्दा बढी टिकाऊ बनाइदिन्छ। EBS भोल्युमको लागि वार्षिक असफलता दर (एएफआर) 0.1% र 0.5% हो, वस्तु वस्तु हार्ड ड्राइवको लागि 4% भन्दा कम।
त्यहाँ टाइमटेकको लागि डेटा ब्याकअप अप योजना छ?
हो। हामी तपाईंको डेटा सुरक्षित, भरपर्दो र तपाइँलाई हरेक समयमा पहुँचयोग्य राख्न को लागी धेरै थकित छौं। हामी हरेक संभावित आपदाको लागि तैयार छौं। सबै डेटा नियमित रूपमा अनुसूचित पूर्ण र वृद्धिशील ब्याकअप को माध्यमद्वारा सुरक्षित गरिएको छ र ब्याकअप डेटा नियमित (अनुसूचित) आधारमा सुरक्षित अफसाइट बैकअप स्थानमा पठाइएको छ यसलाई थप सुरक्षित गर्न। हामी दुवै डेटा र सर्भर स्न्यापसट समय समयमा समय गर्छौं। यदि पनि केहि सर्भर वा हार्डवेयर विफलता भए पनि, यो धेरै छोटो अवधिमा अनलाइन फिर्ता गर्न सक्षम हुनेछ।
टाइमटेकले अपरेसन बिना विच्छेदनलाई कस्तो परिचालन गर्दछ?
प्रायजसो कम्पनीहरू जो सफ्टवेयर अपग्रेडको माध्यमबाट गएका थिए तर यसको बिना प्रत्यक्ष हुनेछ। हामी तपाईंलाई यो सिरदर्दलाई तपाईंको व्यापारमा विच्छेदन बिना निर्दोष अपग्रेड प्रदान गर्न निश्चित गरेर तपाइँलाई सम्हाल्छ। सबै अपग्रेडहरू टाइमटेक पूर्वाधार र अनुप्रयोग स्तरमा कुनै प्रयोगकर्ता हस्तक्षेप बिना गरिनेछ। हामीले टाइमटेक विकसित गरेका छौं र यसको पूर्ण नियन्त्रण छ, हाम्रो अपग्रेड धेरै कम छ र केवल स्थापना र स्थापना रद्द गर्नु भन्दा विशिष्ट फाइलहरूमा लागू हुन्छ।
कसरी टाइमटेक अपग्रेड रिजर्भेसन र प्रणाली परिवर्तनको प्रबन्ध गर्दछ?
हाम्रा प्रणाली र उत्पादनहरूमा परिवर्तनहरू विभिन्न टोलीहरू, विकास, गुणस्तर आश्वासन, र अपरेसन सहित विभिन्न पूर्व-उत्पादन प्रयोगशालाहरूमा राम्रो तरिकाले परीक्षण गरिएका छन्। यी परीक्षणहरूले मात्र उच्च गुणस्तर, राम्रो तरिकाले विकसित परिवर्तनहरू यसलाई "लाइभ" वातावरणमा बनाउँदछ, र प्रभाव र डाउनटाइम तपाईंलाई अनुभव कम गर्नुहोस्।
एकीकरण क्षमताओं के हो?
हाल, टाइमटेकबाट सबै डेटा प्रदान गरिएको छ। तेस्रो पार्टी आवेदनको लागि थप प्रत्यक्ष एकीकरण वा एपिआई कल उपलब्ध छैन। वैसे पनि, तपाइँ अझै पनि पेरोल प्रसोधनको लागि आफ्नो इच्छित उत्पादन प्राप्त गर्न हाम्रो डेटा निर्यात सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
टाइमटेक आवेदन स्केलेबल छ?
हो। तपाईंको व्यापार बढ्दै जाँदा, तपाईं सजिलै संग तपाईंको नयाँ टर्मिनल वा प्रयोगकर्तालाई कुनै सेवाको कुनै पनि विच्छेदको समय समयमा थप्न सक्नुहुन्छ। Amazon EC2 को साथ, यसले हामीलाई सक्षमता वा मिनेट भित्र, क्षमता वा दिनहरू कम गर्न सक्षम गर्दछ। हामी एकै, सैकड वा हजारौँ पनि हजारौं सर्भरहरू कोसिस गर्नैपर्छ एकै साथमा हाम्रो आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न।
को रूप मा हाम्रो बुनियादी ढाँचा को आवश्यकता को अनुसार मापन गर्न को लागी एकदम लचीला छ, हामी तपाईंको अनुरोध को हेरचाह गरिरहेको छ सुनिश्चित गर्नुहोस।
TimeTec मल्टी-टेनेंट एसएएस वा एएसपी छ?
TimeTec संग, हामी एकाधिक र एक अन्य केन्द्रीकृत उपयोगकर्ता डेटा तह जोडने को काम मा बहु-किरायेदार सासा महसूस गर्न को लागि काम गर्दै छन्। यस्तो रूपमा, धेरै ग्राहकहरू अनुप्रयोग र डेटाबेसको समान टुक्रा साझेदारी गर्दैछन्। डाटाबेसको संख्या एक हुँदा यसको सीमा नाघ्यो र यी धेरैले मर्मत र समस्या निवारण कार्य को मात्रा कम गर्छ।
" मल्टी-टेरिसी " स्केलेबिलिटी प्रदान गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतिमान पारी हो, र साँचो सासा समाधान र एएसपी समाधान बीचको मुख्य भिन्नता हो।
मल्टी-टेनेंट र एएसपी बीच तुलना
माथिको सबै सुनिश्चित गर्नको लागि TimeTec प्लेटफर्मको लागि आर्किटेक्चर र इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के हो?
TimeTec प्लेटफर्मको लागि, कृपया हाम्रो टेक्नोलोजी व्हाइट पेपरलाई हेर्नुहोस् ।